နယူးအတွေ့အကြုံများနယ်လှည့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကများမှာ. သို့သျောလညျး, တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးတိုးရစ်-ဖော်ရွေမျက်မှောက်တစ်ဦးစျေးဝယ် network ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့တစ်ဖယောင်းတိုင်ကိုင်လို့မရပါဘူး, အဘယ်သူမျှမကိစ္စကိုဘယ်လိုအထင်ကြီး. စျေးဝယ်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုဒီအသိရကြ, and there are fortunately plenty of cities in Europe where they can unleash…
ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ယနေ့ရရှိနိုင်ပါသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမျိုးစုံ Modes သာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ခရီးသွားလာမှုနှိုင်းယှဉ်ရထားခရီးသွားအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, အရာ mode ကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်? ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားမှာ, ကျနော်တို့ကဘက်လိုက်တယ်၊ ရထားခရီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်…